युगसम्बाद साप्ताहिक - गरिबी बढेको कि तथ्यांक गलत ?
Sunday, 04.05.2020, 11:12pm (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 02.28.2012, 10:21am (GMT+5.5)
प्रस्तुत तथ्यांक आफैंमा प्रश्न खडागर्ने खालको छ । अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक भएको यस्तै तथ्यांकमा २०६० देखि २०६६ सम्ममा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको अनुपात १८ प्रतिशत विन्दुले घटेर १३ प्रतिशतमा आएको भनिएको थियो । अहिले गरिबीको रेखामुनीको संख्या २५ प्रतिशत कसरी पुग्यो ?
विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक गरिएको सो सर्वेक्षण अनुसार ६ वर्षमा आय असमनता उल्लेख्य गिरावट आएको उल्लेख गरेको थियो । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै अमेरिकाको एउटा विश्वविद्यालयले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालमा ६० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेको देखाइएको थियो । त्यसै वर्ष सार्वजनिक भएका अन्य तथ्यांकहरूमा गरिब र धनीबीचको अन्तर बढ्दै गएको र धनी झन् धनी हुँदै जाने तथा गरिब झन् गरिब हुँदै जाने गरेको थियो । अहिलेको तथ्यांकमा पनि त्यसमा सुधार छैन । नेपाल दक्षिण एसियामै असमानताको शिखरमा रहेको मुलुकको रुपमा चित्रित भएको छ ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ अनुसार शहरमा १५ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । क्षेत्रगत हिसाबमा सबैभन्दा बढी गरिब सुदूरपश्चिममा ४५.६१ प्रतिशत र त्यसपछि मध्यपश्चिममा ३१.६८ प्रतिशत छन् । पश्चिमाञ्चलमा २२ प्रतिशत, मध्यमाञ्चलमा २१ प्रतिशत र पूर्वाञ्चलमा २१ प्रतिशत गरिब रहेको जनाइएको छ ।
कुल जनसंख्यामा सुदूरपश्चिममा ८.८ प्रतिशत र मध्यपश्चिममा १३ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांकमा छ । त्यस्तै, भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी
गरिब छन्, जहाँ ४२ प्रतिशत गरिब छन् भने पहाडी क्षेत्रमा २४ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा २३ प्रतिशत गरिब छन् ।
पछिल्लो तथ्यांकले एउटा भ्रमलाई भने चिरेको छ । तराईमा राजनीति गरिरहेका मधेशी नेताहरूले भनेजस्तो तराईमा पिछडिएका, गरिब र अवसर नपाएकाहरूको संख्या बढी छ र राज्यले उनीहरूलाई वेवास्ता गर्दैआएको छ भन्ने प्रचारलाई भने गलत ठह¥याएको छ । मुलुकको तीन भौगोलिक क्षेत्रमा तराई सबैभन्दा कम गरिबी रहेको क्षेत्र देखिएको छ । कृषियोग्य जमिनको उपलब्धता, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको स्थापना, सडक यातायात, सिंचाई आदिको सम्भावनाले तराईको गरिबी घट्दै गएको छ भने पहाड र हिमाली क्षेत्रको बढ्दो छ ।
त्यसो त गरिबमा पहाडका दलित सबैभन्दा बढी छन् भने त्यसपछि तराईका दलित पर्दछन् । ४४ प्रतिशत पहाडी दलित र ३८ प्रतिशत तराईका दलित गरिबीको रेखामुनि छन् ।
मुलुक रुपान्तरणको अभियानमा रहेका बेला एक वर्षको अन्तरालमै गरिबीको विषयमा आएका दुई अलग अलग तथ्यांकले मुलुकको आर्थिक–सामाजिक अवस्थाको नांगो चित्र मात्र प्रस्तुत गरेको छ । गरिबी निवारणको गगनभेदी नारा घन्काउनेहरू अघिल्लो वर्ष गरिबी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा जसरी रमाएका थिए यो वर्ष गरिबीको रेखामुनीको संख्या २५ प्रतिशत हुँदा चुपचाप देखिएका छन् ।
तथ्यांकलाई मिथ्यांककै रुपमा प्रस्तुत गरेर विदेशीले दिएको निर्देशन अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने र सोही आधारमा लाभको अपेक्षा गर्ने गलत प्रवृत्तिका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था जटिल बन्दै गएकोमा कुनै शंका छैन ।
देशमा उद्योगधन्दा खुल्न सकेका छैनन् । त्यसो हुँदा बेरोजगारी समस्या तीब्र रुपमा बढ्दै छ । रोजगारीको अवसर न्यून हुँदै गएपछि सक्षम युवापुस्ता विदेश पलायन भइरहेका छन् । त्यहाँबाट नेपालीहरूले वर्षेनि पठाउने गरेको विप्रेषण रकम कम त छैन तर त्यसको उत्पादनमूलक उपयोग हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदरमा कुनै सघाउ पुगेको छैन । यदि विप्रेषणको रकमलाई पूँजी निर्माणको काममा लगाउन सक्ने हो भने त्यसले रोजगारीको सिर्जना गर्ने भए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्ने रणनीति बन्न सकेको छैन । खाली तथ्यांक र मिथ्यांकको ढड्डा केलाएर आत्मरतिमा रमाउने मात्र काम भैरहेको छ ।
ऋण लगानीको विज्ञापन गर्नुपर्ने अवस्था (02.20.2012)